အင်္ဂါနေ့, ဧပြီ 5, 2011 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ကျနော်တို့အံ့သြဖွယ်အချို့နှင့်အတူအလုပ်လုပ်ကြသည် ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေး ကိုယျ့ကိုယျကိုကုမ္ပဏီများနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဖောက်သည်များနှင့်။ ပြည်သူ့ဆက်ဆံရေးသည်ကြီးမားသောရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ Dittoe PR မှကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရာဓလေ့များကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် New York Times ကို, Mashable နှင့်အခြားလူကြိုက်များက်ဘ်ဆိုက်များတစ်အိမ်ရှင်။
PR ပညာရှင်များသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောသတင်းထုတ်ပြန်ချက်များမည်သို့ရေးရမည်ကိုနားလည်ပြီး၎င်းတို့အားမှန်ကန်သောပရိသတ်သို့ဖြန့်ဝေရန်မည်သို့မည်ပုံနားလည်သည်၊ တစ်ခါတစ်ရံတွင်သူတို့သည်ရှာဖွေရေးအတွက်ဖြစ်နိုင်သကဲ့သို့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များကိုလည်းပိုမိုကောင်းမွန်အောင်မလုပ်ဆောင်နိုင်ပါ။
သင်၏ Press Release အသွားအလာကိုတိုင်းတာနိုင်ကြောင်းအမြဲတမ်းသေချာပါစေ။ ကျနော်တို့ထည့်ပါ မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးခြေရာခံခြင်းနှင့်ထူးခြားသောဆင်းသက်စာမျက်နှာများ အသွားအလာဘယ်ကလာသည်၊ ၎င်းသည်မည်မျှတန်ဖိုးရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့သိနိုင်သည်။
အသုံးချ ခေါင်းစဉ်အတွက်သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများ သင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏ - ပုံမှန်အားဖြင့်၎င်းကိုစုစည်းထားသည့် destination sites များ၏စာမျက်နှာခေါင်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
target က ၁ မှ ၃ သို့သက်ဆိုင်ရာသော့ချက်စာလုံးများ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းနှင့်သင်သူတို့ကိုထပ်ခါတလဲလဲပါတယ်သေချာ။ ၎င်းတို့ကိုခေါင်းစဉ်ငယ်များဖြင့်အသုံးပြုခြင်းသို့မဟုတ်သူတို့ကိုစာလုံးမည်းဖြင့်စာလုံးမည်းဖြင့်ရေးခြင်းအမြဲတမ်းအထောက်အကူပြုသည်။
ပါဝင် နောက်ကျောသင့်ရဲ့ site ကိုသို့မဟုတ်ဆင်းသက်စာမျက်နှာမှလင့်များ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အတွင်းနှင့်သော့ချက်စာလုံးသို့မဟုတ်စကားစုကိုသေချာစွာချိတ်ဆက်ပါ။ မဟုတ် သင့်ကုမ္ပဏီအမည် သင် link တစ်ခု ထပ်၍ မထည့်နိုင်လျှင် keyword link နှင့်ကပ်လျက် link ကိုရှာပါ။
ပုံတွေသုံးပါ သင့်ရဲ့သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၏အခြေအနေတွင်။ သော့ချက်စာလုံးကို သုံး၍ ဖိုင်ကိုနေရာပေးရန် (dashes space)၊ ၎င်းကိုအခြားစာသားသို့မဟုတ်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြင့်ထည့်နိုင်သည်ဆိုပါက keyword ကိုသုံးပါ။
ပိုက်ဆံဖြုန်း။ ငါဖြန့်ဖြူးဘို့ပေးဆောင်ခြင်းမရှိဘဲမတိုင်မီသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ငါဖြန့်ချိပြီးသူတို့တစ်တွေတိုးတိုးတဆင့်ဖြန့်ဖြူးဘို့ပေးဆောင်တိုးတိုးမပေးခဲ့ပါဘူး Wရာဝတီ၊ PRWeb၊ PressKing သို့မဟုတ်အခြား ၀ န်ဆောင်မှုများသည်သင်၏သတင်းကိုအခွင့်အာဏာကြီးသောသတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များပေါ်တွင်ကောက်ယူခြင်းဖြစ်နိုင်ခြေကိုမြင့်တက်စေနိုင်သည်။
သတင်းဖြန့်ချိမှုကိုအကောင်းဆုံးအသုံးပြုခြင်းသည်ထိုသတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအခြားသက်ဆိုင်သောစက်မှုလုပ်ငန်းသို့မဟုတ်သတင်းဝက်ဘ်ဆိုက်များမှတစ်ဆင့်ဖြန့်ဝေပြီးစုစည်းသည့်အခါသင့်ကုမ္ပဏီ၏ဝက်ဘ်ဆိုက်သို့ထပ်မံမြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။ သင်၏ site သို့တန်ဖိုးရှိသော backlinks များကိုထုတ်ယူခြင်း၊ သင်၏အဆင့်ကိုမြှင့်တင်ခြင်းနှင့်သင်၏ site ၏ search engine များဖြင့်သင်၏အခွင့်အာဏာကိုတိုးမြှင့်ခြင်းအခွင့်အလမ်းကိုလက်လွတ်မခံပါနှင့်။
Tags: ချစ်တယ်ကွမ်းခြံကုန်းprPR ဖြန့်ဖြူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖြန့်ဖြူးသတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရေးအသားမင်္ဂလာပါကဗျာ
ဧပြီ 5, 2011 မှာ 11: 15 pm တွင်
ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြောတာကကျွန်တော်တို့ဟာသတင်းဖြန့်ချိရေးမှာ SEO ကိုလျှော့ချတဲ့ဗားရှင်းကိုသုံးသင့်တယ်ဆိုတာပါ။
ဧပြီ 5, 2011 မှာ 11: 23 pm တွင်
လုံးဝ Bob ။ အချို့သော PR ဖြန့်ချိရေးဆိုင်များတွင် HTML ကိုအသုံးပြုရန်အခွင့်အရေးမရှိပါ။ ရလဒ်အနေနှင့်ကပ်လျက်သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ကောင်းမွန်သောဖြန့်ဖြူးမှုကိုအသုံးပြုခြင်းကကူညီနိုင်သည်။
ဧပြီ 6, 2011 မှာ 6: 54 pm တွင်
သင်၏ post Doug in တွင် PRWeb ၏ဖော်ပြချက်ကိုကျေးဇူးတင်ပါ
PRWeb.com တွင်ကျွန်ုပ်တို့တွင်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်အတွက်သင်၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်စေရန်သင်ယူရန်ရင်းမြစ်များစွာရှိသည်။ ဤနေရာတွင်စတင်ရန်အမြန်ဆုံးအချက် ၅ ချက်ရှိသည်။ အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသင်၏ထင်မြင်ချက်တွင်မှန်ကန်သည်၊ သော့ချက်စာလုံးများနှင့်ကောင်းမွန်သောဖြန့်ဖြူးမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည် SEO ကိုအမှန်ပင်အထောက်အကူပြုသည်။
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များအတွက် SEO နှင့် ပတ်သက်၍ အခြားမေးခွန်းများရှိပါကကျွန်ုပ်တို့အား @prweb twe အမြဲတမ်းတွစ်တာပို့နိုင်သည်
ဧပြီ 7, 2011 မှာ 12: 30 pm တွင်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များပေးပို့ခြင်းသည် SEO အတွက်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်တို့ဟာ SEO တိုင်းတာခြင်းကိရိယာများ (ကျွန်ုပ်တို့၏သတင်းထုတ်ပြန်ချက်နှင့်မီဒီယာစောင့်ကြည့်လေ့လာရေး modules များနှင့်အတူ) ကိုလည်းအဘယ်ကြောင့်ပေးနေသနည်း - သင်၏အွန်လိုင်းလုပ်ဆောင်မှုကိုအမြဲကြည့်ရတာကောင်းတယ်မဟုတ်လား?
Charles - စီအီးအို၊ PressKing
ဧပြီ 12, 2011 မှာ 1: 15 pm တွင်
သတင်းထုတ်ပြန်ချက်ဖြန့်ဖြူးခြင်းသည် SEO link link တည်ဆောက်ခြင်း၏အရေးပါသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်။ ဖြန့်ချိမှု၏ကိုယ်ထည်တွင် anchor text နှင့် link များကိုထည့်သွင်းရန်အရေးကြီးသည်။ သို့သော်သတင်းစာတစ်စောင်သည်ထိုက်တန်သောသူဖြစ်ရန်လိုအပ်သည်ကိုသင်သတိရသင့်သည်။ လျစ်လျူရှုခံရမည့်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်တွင်အချိန်နှင့်ငွေကိုမသုံးစွဲပါနှင့်။
ဧပြီ 12, 2011 မှာ 1: 59 pm တွင်
Thswewswsworthiness ။ ဘယ်အချိန်မှာသံသယကထွက်ရ!
11:2011 pm မှာအောက်တိုဘာ 10, 42
ကျွန်ုပ်ကုမ္ပဏီအတွက်သတင်းထုတ်ပြန်ချက်များနှင့်တာဝန်ပေးခံရပြီးအကြောင်းအရာများမိတ္တူကူးခြင်းကြောင့်ထိခိုက်ခြင်းမှမည်သို့ရှောင်ရှားနိုင်မည်ကိုသိလိုပါသလား။ တင်ရန်အတွက်ကျွန်ုပ်၏တတိယအကြိမ်တောင်းဆိုချက်အရ၊ အကယ်၍ ဒီဆိုဒ်များတစ်ခုစီသည်ကျွန်ုပ်၏ဆောင်းပါးကိုအမှန်တကယ်တင်ထားလျှင်၊ ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များသည်၎င်းကိုထပ်တူအကြောင်းအရာများအဖြစ်မြင်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အသစ်ကိုမြှုပ်နှံနိုင်သည်ကိုသဘောပေါက်ခဲ့သည်။ လိုက်နာရန်အကောင်းဆုံးနည်းဗျူဟာကဘာလဲ?
12:2011 pm တွင်အောက်တိုဘာ 7, 18
အကယ်၍ သင်သည် 'ထပ်တူအကြောင်းအရာ' ကိုအလေးအနက်လေ့လာပါက၎င်းကိုသင်အပြစ်ပေးခံရမည်ဟူသောဒဏ္aာရီတစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်။ ထပ်ဆင့်အကြောင်းအရာပြစ်ဒဏ်ကဲ့သို့သောအရာမရှိပါ။ တရားဝင်ဂူဂဲလ်ဘလော့ဂ်ကိုကြည့်ပါ။
အကြောင်းအရာများကိုပုံတူပွားခြင်းသည်အပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုမရှိပါ။ သို့သော်၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုပျက်ပြားစေနိုင်သည်။ အဘယ်ကြောင့်? ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူတွေဟာတင်ပို့လိုက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပြန်ဆက်သွယ်နိုင်လို့ပဲ။ အကြောင်းအရာတွေကို URL တစ်ခုတည်းမှာပဲထုတ်ဝေစေချင်တယ်၊ ဒါမှလူတွေကအဲဒီ URL ကိုချိတ်ဆက်နိုင်တယ်။ သူတို့ကထို URL တစ်ခုတည်းကိုချိတ်ဆက်သောအခါသင်အဆင့်သတ်မှတ်သည်။ သူတို့သည်အခြားစာမျက်နှာများကိုချိတ်ဆက်သောအခါသင်၏စာမျက်နှာသည်တတ်နိုင်သလောက်အဆင့်သတ်မှတ်မည်မဟုတ်ပါ။